Al-Shabaab oo shan qof oo ay ku eedaysay basaasnimo ku toogatay gobolka Shabeellaha Hoose - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAl-Shabaab oo shan qof oo ay ku eedaysay basaasnimo ku toogatay gobolka Shabeellaha Hoose
Al-Shabaab oo shan qof oo ay ku eedaysay basaasnimo ku toogatay gobolka Shabeellaha Hoose
January 3, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Sawirka: Maleeshiyo hubaysan oo katirsan Al-Shabaab.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa shan qof ku toogatay gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay sheegayaan wararku.
Toogashada ayaa horaantii asbuucaan ka dhacday fagaare kuyaala magaalada Kurtun-waarey ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Dadka ay Al-Shabaab toogatay ayay ku eedaysay in ay basaasiin u ahaayeen sirdoonka dowladda Soomaaliya, iyo wadamada Kenya iyo Itoobiya.
Tani waa toogashadii ugu horeysay ee ay fuliso maleeshiyada Al-Shabaab sanadka cusub ee 2018.
Asbuucii lasoo dhaafay, Al-Shabaab ayaa dil toogasho ah ku fulisay shan qof, oo uu ku jiro wiil 16-sanno jir ah, kuwaasoo ay ku eedeeyeen in ay jaajuusiin u ahaayeen Kenya, Mareykanka iyo ciidamada dowladda Soomaaliya.
Sida ay warbixinadu muujinayaan, Al-Shabaab ayaa dil toogasho ah ku fulisay dad dhan 22 qof sanadkii hore ee 2017, oo ay ku eedeeyeen basaasnimo iyo dambiyo kale oo ay ku jiraan galmo iyo musuqmaasuq.
April 3, 2018 Milatariga Mareykanka oo sideed duqeymood ka geystay gudaha Soomaaliya tan iyo 2018
April 3, 2018 Maxkamada ciidamada Puntland oo dil toogasho ku xukuntay askari u goostay Somaliland
Madaxweyne Cabdiweli: dhismaha garoonka diyaaradaha Gaalkacyo 15 bisha afraad ee sanadkan ayaan bilaabaynaa
Dubai-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa sheegay in dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo dhawaan la bilaabi doono. “Hore ayeynu u soconaynaa, waanuna wadnaa hawsha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, waxa saxda ahina waxa weeyaan [...]